I-Raw (1,5-dimethylhexyl) ammonium powder (5984-59-8) - Phcoker
SKU: 5984-59-8 Isigaba: Weight Loss
I-Raw (1,5-dimethylhexyl) ammonium powder (i-5984-59-8) ividiyo
I-Raw (1,5-dimethylhexyl) ammonium powder (5984-59-8) Imininingwane ye-chloride
Igama Product I-Raw (1,5-dimethylhexyl) ammonium powder chloride
Igama leKhemikhali I-1,5-Heptanamine, i-2-methyl-, i-hydrochloride (i-6: i-1) i-1-dimethylhexyl) i-ammonium powder chloride;
Brand NAme I-Raw (1,5-dimethylhexyl) ammonium powder chloride
I-Drug Class Amakhemikhali okhethekile
CAS Inombolo 5984-59-8
I-molecular Fi-ormula C8H20ClN
I-molecular Weziyisishiyagalombili 165.7041
IMisa ye-Monoisotopic I-235.207 g / mol.
Iphuzu lokubilisa 229.3 ° C ku-760 mmHg
I-Half Half-Life ukuphikelela emanzini (isigamu sempilo izinsuku ezingu-2)
Sukufaneleka I-iSoluble e-ammonia, i-hydrazine, i-hydrozine elula, i-acetone Engenayo i-diethyl ether, i-ethyl acetate
Aukuphikisana esetshenziselwa i-agent esebenzayo e-systemic ekwelapheni i-alkalosis enamandla kakhulu, ekuhlolweni komlomo we-acid ukulayisha ukuhlola i-distal ye-tubular acidosis, ukugcina umchamo nge-acid pH ekwelapheni kwezifo ezithile ze-urinary-tract.
Raw (1,5-dimethylhexyl) i-ammonium chloride powder (5984-59-8) Incazelo
I-Raw (i-1,5-dimethylhexyl) i-ammonium powder chloride iyinhlanganisela engahleliwe ne-formula NH4Cl kanye nosawoti omhlophe wekristallini ogcwele amanzi amaningi. Izixazululo ze-ammonium chloride zi-acly acidic. I-sal ammoniac yigama le-nature, i-mineralogical ifomu le-ammonium chloride. Amaminerali avame ukubunjwa ekushiseni amalahle okushisa amalahle kusuka ekunciphiseni kwamagesi athola amalahle. Itholakala nakwezinye izinhlobo zama-volcanic winds. It is ikakhulukazi esetshenziswa njengoba umquba kanye agent flavoring kwezinye izinhlobo udoliice. Kuyinto umkhiqizo kusuka ukusabela hydrochloric acid kanye ammonia.
(1,5-dimethylhexyl) i-ammonium chloride powder (i-5984-59-8) Inqubo yesenzo
I-anesthesia yasendaweni ikhiqizwa ngokusetshenziswa kwesimo sezulu kwezisombululo ze-hydrochloride noma isisekelo samahhala se-2-Amino-6-methylheptane emehlweni enogwaja. Ngokungazinja ezinja ezingenasisindo nge-sodium ye-pentobarbital, i-2-Amino-6-methylheptane hydrochloride imibukiso 1 / 500-1 / 1000 umsebenzi wokucindezela we-epinephrin. I-2-Amino-6-methylheptane hydrochloride itholakala ukuthi ibangele ukwanda kwenani le-cardiac kanye nobukhulu bokuqedwa. Izinja ezingenakuthandana, ezinama-sodium ye-pentobarbital, izilinganiso ze-0.5 kuya ku-1.0 mg kilogram ngayinye yesisindo somzimba we-2-Amino-6-methylheptane hydrochloride ayikho umphumela obonakalayo emathunjini amancane, ukuxoshwa kwesisu sokuvuthwa kwamanzi, ukuvinjelwa komchamo noma ukuphefumula. I-intraperitoneally kuma rats, i-2-Amino-6-methylheptane hydrochloride itholakala ukuthi ayinayo yonke isimiso sezinzwa esishukumisayo eshukumisa isenzo emithonjeni engeyona eyingozi. Akekho ubufakazi obucacile bokucasuka komuthi we-tracheo-bronchial mucosa ophawulwe ezinogwaja noma emagundini okufaka i-2-Amino-6-methylheptane mahhala nsuku zonke ngezinsuku ze-10 ne-30 ngokulandelana.
Sebenzisa of (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride powder (5984-59-8)
▪ Ukulahlekelwa kwesisindo.
▪ Njengomuthi wemithi ophakathi kwe-octamylamine
▪ I-agent esebenzayo yokuvuselela
Kunconywe (i-1,5-dimethylhexyl) i-ammonium chloride powder (i-5984-59-8) Isilinganiso
Azikho izincomo ezisemthethweni zokulandelela ezisetshenziselwe (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride, kodwa ngokusekelwe ezifundweni zezilwane nokufana ne-DMAA, umthamo ophephile wokuvikela uzoba ngu-1mg / kg we-bodyweight kuze kufike ku-160mg. I-LD50 (umthamo odingekayo ukubulala isigamu sazo zonke izilwane zokuhlola) we-1,5-dimethylhexyl) i-ammonium chloride kuya kumagundane yi-59mg / kg. Futhi, kungcono ukunamathela ngokulinganisa okwemvelo okwamanje futhi kuhle, ucwaningo oluningi kufanele luqhutshwe ngaphambi kokukhululwa okubanzi kumaphrotheni. Isikhathi sokuhlakanipha, kungcono ukuthatha imizuzu ye-30-60 ngaphambi kokuzivocavoca ukuze usize ukuthuthukisa izici zokuqeqesha, kanti futhi kungathathwa nsuku zonke njengokucindezela ukudla.
Izinzuzo ze (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride powder (5984-59-8)
♦ Ukusebenza njenge-bronchodilators (ukukhuliswa kwe-bronchi ukuze kuqhume umoya ngaphezulu)
♦ Umsebenzi we-decongestant (ukuvimbela imithwalo yegazi ukuze wehlise ukuvuvukala ngakho-ke ikhono elingcono lokuphefumula).
♦ Ukugxila okuthuthukisiwe nokucindezela okunamandla okunamandla.
♦ (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride ingasetshenziselwa ukuphakamisa ikhono layo lokukhulisa amazinga wamandla nokuthuthukisa ukugxila nokunakwa.
♦ (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride powder ibambe isakhiwo esifanayo kuya emakhemikhali abonakala njengama-monoamine akhipha ama-agent. Okusho ukuthi, kungase kwandise amazinga we-monoamines afana ne-dopamine ne-noradrenaline.
♦ Kungenzeka ukusekela ukusebenza okujulile nokunciphisa i-RPE (isilinganiso sokuzikhandla okubonakalayo).